(၏မျက်မှောက်ဖမ်းရန်) ပြင်သစ် "Apercevoir" Conjugate
ပြင်သစ်ကြိယာ "Apercevoir" အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ conjugation
ပြင်သစ်ကြိယာ apercevoir Conjugating သည်အခြားကြိယာထက်အနည်းငယ်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးမမှန်ကြိယာဖြစ်ပြီး conjugation များအတွက်အသုံးအများဆုံးပုံစံများအတိုင်းလိုက်နာပါဘူးလို့ဖြစ်ပါတယ်။
Apercevoir "၏ရှေ့တော်၌အမီလိုက်ရန်" သို့မဟုတ် "မြော်ရန်" ကိုဆိုလိုသည်ကတစျဦးဖွစျသညျ အာရုံခံစားမှုသို့မဟုတ်အမြင်များ၏ပြင်သစ်ကြိယာ ။ ဤသင်ခန်းစာအနည်းငယ်ခက်ခဲဖြစ်နိုင်သည်နေစဉ်, ကသင့်ရဲ့ဝေါဟာရချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်အဖြစ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကောင်းတစ်ဦးတဦးတည်းပါပဲ။
ပြင်သစ်ကြိယာ Apercevoir Conjugating
ပြင်သစ်သင်ယူသည့်အခါကြိယာ conjugation အရေးကြီးလှသည် သူတို့အသိစေတဲ့ထားသောစာပိုဒ်တိုများကူညီလို့ပဲ။ ကျနော်တို့ conjugate တဲ့အခါမှာကျနော်တို့နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ဖို့ကြိယာ၏ဇာတ်သိမ်းကိုပြောင်း ဘာသာရပ်နာမ်စား နှင့်တင်းမာနေ။ ဤအထူးနောက်ဆုံးတွင်မရှိရင်, သင့်ပြင်သစ်စကားလုံးသည်သဒ္ဒါနည်းမှန်ကန်သောဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
မမှန်ကြိယာ သူတို့တစ်တွေပုံမှန်ပုံစံကိုလိုက်နာကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ apercevoir တူသောပြင်သစ်ကျောင်းသားတစ်ဦးစိန်ခေါ်မှုတရပ်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်နောက်ဆုံးတွင်လည်း -cevoir အတွက်အဆုံးသတ်ကအခြားပြင်သစ်ကြိယာ၏ conjugation သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဤသည်တို့ပါဝင်သည် concevoir (ပဋိသန္ဓေ ယူ. ဖို့), décevoir (စိတ်ပျက်ဖို့), percevoir (ရိပ်မိဖို့), နှင့် recevoir (လက်ခံရရှိရန်) ။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဖြစ်ကောင်းသည်ဤကြိယာ conjugation ကျက်မှတ်ပိုပြီးခက်ခဲအချိန်ရှိသည်မည်ဟုဆိုကြ၏။ သို့သျောလညျး, လုံလောက်အောင်အလေ့အကျင့်နှင့်အတူ, သင်ရုံဒဏ်ငွေပြုလိမ့်မည်။ ဒီဇယားကို Explore နှင့်ပထမဦးဆုံးမှာပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်တင်းမာနေအာရုံစိုက်ပါ။ အဆိုပါမစုံလငျသငျသညျမကြာခဏ Pass တေးရေးဆရာကိုသုံးနိုင်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖြစ်အရေးမပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်, ပြောသငျသညျဟုဆိုလိမ့်မည် "ငါမြော်" "ည '' aperçois။ "
Apercevoir 's အများကိန်း
အဆိုပါ အများကိန်း apercevoir ၏ apercevant ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ - ပုရွက်ဆိတ်ဇာတ်သိမ်းကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုအသုံးပြု -ing ဆင်တူသည်။ ဖြစ်ထားဖို့လိုပါလျှင်၎င်းသည်လည်းတစ်ခုနာမဝိသေသန, gerund, ဒါမှမဟုတ်နာမ်အဖြစ်ပြုမူနိုင်ပါတယ်။
Apercevoir ၏ Pass တေးရေးဆရာ
ပြင်သစ်တွင်ကသုံးစွဲဖို့အလွန်ဘုံရဲ့ Pass တေးရေးဆရာ အတိတ်တင်းမာနေသည်။ သငျသညျကိုသာကြိယာများအတွက်အတိတ် participle မှတ်မိဖို့ရှိသည်ကြောင့်ဤလွယ်ကူ conjugation စေသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထိုaperçuဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့သည်လည်းတစ်ခုသုံးရန်လိုအပ်သည် ရန်ကြိယာ သော avoir ဤကိစ္စတွင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အတိတ် participle နှင့်အတူဒီဝတ်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့က "ငါသည်ကွိုမွငျ။ " ပြောနိုင်ပါတယ် ပြင်သစ်မှာတော့ဒီ "j'ai aperçu။ " ဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါ "ai" avoir များအတွက် conjugation ဖြစ်ပါတယ်။
Apercevoir ပို conjugation
ဒါဟာ apercevoir အလုံအလောက်ရှုပ်ထွေးသည်မဟုတ်မကြိုက်ဘူးရဲ့, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်လည်းရောနှောသို့အနည်းငယ်ပိုပြီး conjugation add ဖို့ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားအထူးသဖြင့်, အဖြစ်အရေးမပါ ရိုးရှင်းတဲ့ Pass နှင့် မစုံလငျ subjunctive နှစ်ခုတရားဝင်စာဖြင့်ရေးသားအသုံးပြုကြသည်။ အကြောင်းမူကား, သို့သော်သင်သည်ထိုသူတို့သတိပြုမိဖြစ်သင့်သည်။
သငျသညျအခြိနျမှနျမှအဆိုပါ subjunctive နှင့်ခြွင်းချက်ပုံစံများကိုသုံးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ subjunctive တစ်ကြိယာစိတ်ဖြစ်ပါတယ် ကြိယာ၏မသေချာမရေရာအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ကြောင်း။ အဆိုပါခြွင်းချက် ကြိယာအခြေအနေအပေါ်မူတည်သည်: ့နည်းလမ်းများ။
apercevoir ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အဲဒီနှစ်ခုပုံစံများကိုအမှန်တကယ်အတော်လေးအသုံးဝင်ပါသည်။ နှုတ်ကပတ်တရား၏သဘောသဘာဝပေးထား - သေချာပေါက်မြင်သာထင်သာမဟုတ်မမှန်ပါဘူးတဲ့အမြင်အဖြစ် - သင်စကားပြောဆိုမှုတွင်ဤ conjugation များအတွက်အသုံးပြုမှုကိုတွေ့ပါလိမ့်မည်။
သင်သည်အခြား subjunctives နှင့်အခြေအနေများကို skip လေ့ အကယ်. ဤအပေါ်အချို့သောအချိန်ဖြုန်းစဉ်းစားပါ။
တစ်ခုမှာနောက်ဆုံး conjugation ကျနော်တို့ apercevoir ပြုပါတယ်။ ဤအချိန်က အဆိုပါအလွန်အရေးကြီးသည် ကိုမကြာခဏတိုတိုက်ရိုက်ပညတ်တော်တို့ကိုသို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုများအတွက်အသုံးပြုသည်အခြားစိတ်တည်းဟူသော။
ကကြိယာအတွက်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်အဖြစ်အရေးကြီးသော conjugation ခုနှစ်တွင်, သင်နာမ်စားအကြောင်းကိုမေ့လျော့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအစားဟု၏ "nous apercevons," သင်ရိုးရှင်းစွာ "apercevons ။ " ပြောနိုင်ပါတယ်
သငျသညျ apercevoir ဆိုလိုတာက voir အတူပြီးဆုံးကြောင်းသတိပြုမိကြလိမ့်မယ် "ကိုကြည့်ပါရန်။ " အဆိုပါရှေ့ဆက်prévoirနှင့်အတူဖြစ်ပျက်အတိအကျဘာဖြစ်သည့် "ကွိုမွ" ကိုကပြောင်းလဲစေပါသည်။
သင်ကဆက်စပ်မှုကိုမှတ်မိဖို့ "Pre-ကိုမြင်လျှင်" အဖြစ်prévoirကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။
apercevoir နှင့်prévoirနှစ်ဦးစလုံးကိုဆိုလိုတာသောကြောင့် "ကြိုမြင်နိုင်ဖို့," သင်သည်လက်ျာအခြေအနေတွင်အဆုံးစွန်ကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါ conjugation အလွန်ဆင်တူဒါ prévoir conjugate ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ အဖြစ်ကောင်းစွာမကောင်းတဲ့စိတ်ကူးမည်မဟုတ်ပါ။
အီတလီကိုယ်ရေးကိုယ်တာ Pronoun အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
ဂျာမန်ဆိုက်ရောက်ရာပြကမ္မကာရက preposition အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
အီတလီနှင့်အင်္ဂလိပ်စာလုံးအကြီးလုပ်ခြင်းအကြားတွင်5ကွာခြားချက်များ
ပြင်သစ်အပျက်သဘောဆောင်သော Adverb: သူတို့ကိုဖွဲ့စည်းလုပ်နည်း
အင်္ဂလိပ်အတွက်အကြံပြုချက် Make ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
အီတလီကြိယာ conjugation: Correre
"Briller" (Shine မှ) Conjugate လုပ်နည်း
လီယို၏သင်္ကေတပြခုနှစ်တွင် The Sun
တစ်ဦးစာစီစာကုံး Begin လုပ်နည်း: 13 ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမဟာဗျူဟာ
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏5ဘုံအထငျမှား
Kenzo Tang ဗိသုကာ Portfolio, တစ်ခုကနိဒါန်း
သြဂတ်အမျိုးသားဂေါက်ကလပ် Par-3 သင်တန်းအမှတ်စဥ်
အစိမ်းရောင်အာလူးကိုဘယ်လိုအဆိပ်ဖြစ်ပါသလား Solanine အဆိပ်ရှင်းလင်းချက်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဥရောပ: မြောက်အာဖရိက, စစ္စလီကျွန်းနှင့်အီတလီနိုင်ငံ Fighting
ဂျေမီ Ford ကားများ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
"တစ်ဦး Millionaire Be လိုပါသည်ဘယ်သူက" ၏ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်
Dido အဘိဓါန်အဲလစ်ဇဘက် Belle ဇီဝ